Inkcazo yokuhamba: Kwi-intanethi, indlela yokuhambisa ipakethi yolwazi ukusuka kumthombo ukuya kunjongo. #kukhokela ngokuqhelekileyo eyenziwa yigajethi ezinikeziweyo ebizwa ngokuba ngumtshini. Ukuhamba ngeyona nto iphambili ye-intanethi kuba ivumela ukuba imilayezo iqale ngePC enye uze emva koko kwaye ekugqibeleni ufezekise umatshini wokukora. Wonke umntu ophakathi phakathi i-PC wenza umzila ngokuhamba nomyalezo kwi-PC elandelayo. Esinye isahlulo sale nkqubo kubandakanya ukuhlalutya i-tableto yokulandelela ikhetha indlela engcono.
Ukuhamba ngokuphindaphindiweyo kuyaphoswa ngokubhinqa, okwenza umsebenzi othelekisa. Ulwahlulo oluphambili phakathi kwezi zibini kukuba ukugqithisa kwenzeka kwinqanaba eliphantsi kwaye emva koko lide likhulu kwisixhobo sokusebenza nangona ukuhamba kwenzeke kwinani eliphakamileyo apho indawo yamveliso ibaluleke ngakumbi. Okongeziweyo, ngezizathu zokuba ukuhamba kweendlela kwenzeka kwixabiso elikhulu, lingenza uviwo oluxakekayo oluthe xaxa ukuze lugqibe indlela efanelekileyo yepakethi.